Ahoana no ahitanao ireo backlinks momba ny kalitao ho an'ny fanentanana fanentanana tranonkala?
Ny endrika SEO izay miara-miasa hatrany dia ny fananganana rohy. Ity dingana ity dia manondro ny fanatsarana ny tranokalan-tserasera ary misy fiantraikany eo amin'ny tompon'ilay tranonkala sy laharana amin'ny SERP. Google dia mampiasa backlinks ho famantarana famantarana ho an'ny fikarohana sandoka. Na izany aza, tamin'ny 2013 ny Google dia nanova ny algorithm ny laharam-pamokarana nanova ny tontolo dizitaly manontolo.
Misy mpivarotra an-tserasera sasany mbola tsy mahafantatra hoe inona marina i Google no niova tao amin'ny algorithm ary inona no atao hoe backlinks mandoa vola amin'ny tranonkala fanovana. Amin'ity lahatsoratra ity, hanokatra varavarankely hafa momba ny algorithm izahay ary hampiseho anao ny fahasamihafana eo amin'ny backlinks tsara sy ratsy.
Tsy lavitra ny backlinks rehetra
Tsy ny backlinks rehetra no afaka mitondra ny lanjany ho an'ny tranonkalanao, na dia eo aza ny zava-misy fa misy sampandraharaha mendrika hafa milaza aminao ny hafa vaovao. Maro ny SEO manam-pahaizana manokana momba ny SEO izay mikasa ny hanana fisainana an-tsitrapo satria tsy nanasazy azy ireo i Google nandritra ny fotoana lava ary na dia nahazo valisoa tamin'ny loka avo aza. Amin'izao fotoana izao dia niova tanteraka ny toe-draharaha. Google dia nanavao ny algorithm araka izay tranonkala mampiasa spammy tetika fitarainana spammy dia miankina amin'ny sivana ary mahazo ny sazy farany amin'ny Google.
Maro ny mpanoro hevitra SEO izay tsy nanontany momba ny toeran'ny backlinks na oviana na oviana ary tsy nanova ny tetikasa fanorenana rohy satria hatramin'ny fanavaozana ny Google farany. Noho izany, ny rohy atolony ho an'ny tranonkalanao dia tsy afaka ny ho kalitao amin'ny alalana.
Ankoatra izany, raha omena toerana be dia be ianao, dia mety ho marika ihany koa ny fisian'ny hosoka sy ny saka amin'ny raki-tsakafo izay tonga eo amin'ny toerana misy anao. Amin'izao fotoana izao, Google dia tsy miraharaha ny kalitaon'ny backlinks. Raha ny tokony ho izy, dia manombana tsara ny kalitaon'ny backlinks izay manondro ny tranokalanao. Noho izany, raha raisina sira be loatra ny tranokalanao, indrindra indrindra, ao anatin'ny fotoana fohy, Google dia hamaly anao noho ny asa an-tsokosoko.
Ahoana no ahafahan'ny Google mamaritra ny rindran-dalàna momba ny kalitao?
Amin'izao fotoana izao, Google dia manjavozavo kokoa ary afaka manavaka ny rohy spammy avy amin'ny rongony tsara. Azon'i Google atao ny manara-maso raha misy mpampiasa clicking amin'ny rohy ary manombantombana ny isan'ny mpitsidika manaraka ny piklà iray izay napetraka ao amin'ity pejy ity. Raha toa ka mipoitra amin'ny tranokala mandritra ny iray minitra farafahakeliny ny mpampiasa, dia azo havaozina ny rohy raha oharina amin'ny kalitao. Na dia izany aza, raha manokatra pejy manokana ny mpampiasa nefa tsy manaraka rohy, dia mety ho marika ny fisian'ny hosoka.
Mila miala amin'ireo backlinks spammy izay mametraka eo amin'ny tranokalanao ianao satria mety hiteraka fahasimbana amin'ny site SEO. Azonao atao ny manamarina raha toa ka tsy manana backlinks kalitaon'ny tranokalanao ianao na tsia, amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana amin'ny Google. Ny dingana fanesorana ny tsipika mahitsy sy spammy dia mila fotoana sy ezaka. Izany no mahatonga anao ho marina raha mampiasa ny masoivohon'ny SEO na mpanolo-tsaina.
Fiderana ny kalitaon'ny backlinks (sasantsasany, misy ny sasany)
Quality backlinks ny rohy izay azo avy amin'ny manan-danja amin'ny indostria, haavony efa ela. Raha ny tranonkala mifandray amin'ny toerana misy anao eo amin'ny tsenan'ny orinasa iray ihany no mifandraika amin'ny lohahevitrao, ny lohan-drakitra toy izany dia hanampy amin'ny tranokalan'ny SEO anao. Mba hahazoana antoka fa mahazo ny backlinks kalitao ianao dia jereo ny tranonkala iray manondro anao. Tokony hanana mari-pahaizana SEO avo indrindra, indrindra fa ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiovam-po.
Ankoatra izany, zahao ny maha-zava-dehibe ny tranonkala iray. Zava-dehibe ny fahamendrehan'ny Google ho toy ny singa fototra voalohany miaraka amin'ny fahefam-panjakana. Ankoatra izany dia azo atao ny manamarina ny daty navoakan'ny tranonkala farany indrindra. Raha toa ka tsy mavitrika ny tranonkala, dia hahazo ny kalitao sy ny rohy tsy misy ilàna azy ianao Source .